Ahoana ny fomba ahafahanao lehilahy tsara tarehy eo am-pandriana amin'ny lelany sy ny tanana - lahy erogenous faritra.
Mba hahafahan'ny fifandraisana ao amin'ny mpivady ho sambatra sy maharitra, dia ilaina ny mahagaga fa samy hafa ny zavatra mahafinaritra. Ny manan-danja lehibe ho an'ny lehilahy dia manana sehatra midadasika, hany ka ny mahasoa sasany dia ilaina ary tsy ilaina ny zava-dehibe.
Ahoana no ahafahanao mampihetsi-po anao?
Maro ireo psychologista mandinika ny firaisana ara-nofo no manome toky fa mila ny fiheverana ny vehivavy ny lehilahy. Zava-dehibe ho azy ireo ny tsy mandray ara-batana, fa koa fahafinaretana ara-moraly. Fahalalahana goavana iray amin'ny hoe ny hava-malalan'ny olona iray manome fahafinaretana, dia geishas, ​​izay mahafantatra trosa isan-karazany izay afaka mitondra ny solontenan'ny herim-po mahery vaika. Ny vehivavy rehetra dia manana fahafahana hanandrana ny làlany amin'ny tenany, rehefa avy nianatra tsiambaratelo.
Ireo faritra erogenous lehilahy
Ao amin'ny vatan'olombelona dia misy hevi-pihetseham-po marobe, fanentanana izay manome fahatsapana mahafinaritra. Olona maro no tsy mahafantatra momba ny faritra rehetra misy azy, fa ny toe-javatra kosa dia afaka manitsy amin'ny alalan'ny fitantanana "fikarohana fikarohana". Ny fianarana lehilahy iray dia afaka manatsara ny kalitaon'ny fifandraisana akaiky. Azonao atao ny mamantatra ny faritra faran'ny erogenous amin'ny havan-tiana miaraka amin'ny fanampian'ny penina, izay mila mandeha amin'ny vatany, mijery ny fihetsiketsehana.
Nipples. Nahazoana alahelo mora sy fanorohana, izay hitarika namana.
Manan-tsofina. Sarotra ho an'ny solontenan'ny firaisana ara-nofo matanjaka ny manohitra ny fihetsika malefaka ary mitodika manokana amin'ny lobe.
Face and head. Ho an'ireo vehivavy izay liana amin'ny fomba hahatonga ny olona ho tsara, afaka manome toro-hevitra ianao - manasitrana io ampahan'ny vatana io, satria misy hevitra maromaro.
Fehim-bolo sy ny aoriana. Eto ianao dia afaka mandeha ny fantsika eo amin'ny hazavana. Mandeha amin'ny rambony ianao, azonao ampiasaina bebe kokoa amin'ny fampiasana tingle sy patting.
Tanana sy tongotra. Ny ankamaroan'ny teboka dia eo amin'ny faran'ny farany.
Vonjeo ny taova. Ny faritra manan-tsaina indrindra amin'ny lehilahy, ary eto ho an'ny fanentanana dia azonao ampiasaina ny fiteny, molotra, tanana ary ny sisa.
Ary aiza no hahamarina ny zanak'olombelona eo anatrehan'Andriamanitra?
Ho an'ny olon-tiako dia tsara ary ny firaisana dia tsy mifandray amin'ny fikarakarana ara-batana, mila mieritreritra ianao ary manazava ny tsipiriany sasany. Mifidy tsara ny fotoana, noho izany, araka ny famantaranandro biolojika, ny lehilahy dia eo amin'ny tampon'ny asa atao maraina sy aorian'ny sakafo antoandro. Zava-dehibe ny mandinika ny fihetseham-po ara-pihetseham-pon'ny mpiara-miasa. Fitsipika iray manan-danja hafa mahakasika ny fomba ahafahanao lehilahy mahafinaritra eo am-pandriana - mifantoha amin'ny fisehoanao, maneho ny safidinao mahafinaritra. Mividy akanjo marevaka tsara tarehy izay manantitrantitra ny fahamendrehan'ilay sary.
Ahoana no hanomezana fahafinaretana ny lehilahy mahafinaritra?
Maro ny olona no manamaivana ny maha-zava-dehibe ny fifaneraserana mifampikasoka, izay ahafahanao maneho fihetseham-po maro. Tendrombohitra malefaka, mahatsikaiky, mifankatia, resaka momba ny manoroka. Araka ny fanadihadiana, maro amin'ireo solontenan'ny firaisana ara-nofo no tia manoroka. Misy tsiambaratelo maro momba ny fomba hahatonga ny olona ho tsara mandritra ny oroka.
Ny solontenan'ny ankamaroan'ny firaisana ara-nofo dia mahazo fahafinaretana lehibe amin'ny oroka Frantsay, izay ny fampiasana ny molotra fotsiny, fa koa amin'ny lela.
Ny faritra tena mahatsapa ao am-bavanao dia ilay palma, koa atokàny amin'ny lela.
Koa satria misy faritra maro erogely eo amin'ny tarehiny, dia mety ny hanosotra ilay havan-tiana amin'ny fanorohana eo amin'ny handrina amin'ny tendany.
Mandritra ny filalaovana, ataovy tsara ny namana, manoroka ampahany hafa amin'ny vatana, ohatra, ny kibo, midina any am-pahitra.
Ampiasao ny oroka samihafa, ohatra, lalina, fohy, mazava, ary hafa.
Ny fomba hanomezana fahafinaretana olona iray - ny pelaka
Ny firaisana ara-pananahana amin'ny firaisana ara-nofo dia tsy vitan'ny hoe fomba tsara hahatonga ny namana ho tsara, fa koa ny fanehoana ny fitokisana sy ny fitiavana. Vehivavy maro no matahotra ny hifindra amin'ny karazana sahona, mba tsy hisian'ny tsy fahampiana ary tsy hanao zavatra tsy mety. Mba hahatakarana ny fomba hanomezana fahafaham-po ny lehilahy iray, dia ampy ny mametraka fitsipika tsotra vitsivitsy.
Makà toerana tsara mba ahafahana miditra amin'ilay toerana tiany. Avelao hijery ilay dingana ilay lehilahy.
Ny fiantohana ny fitongilana tsara dia hanampy ny saliva, mba ho azo antoka ny fahantrana amin'ny penis rehetra.
Toro hafa, ahoana no fomba ahafahan'ny lehilahy malala mahafinaritra - mampiasa hetsika maromaro, nefa tadidio fa tsy tokony ho maranitra izy ireo. Ataovy ny vavanao, ny lela, ny takolaka ary ny sandrinao, ary esory ny foitrao ary esory ny lohanao.
Diniho ny fihetsiky ny olon-tiany ary rehefa manakaiky ny fara-tampony izy dia manamaivana ny fihetsika ataony, mahatonga azy ireo ho mafy hatoka.
Ny fitomboan'ny taovam-pananahana na ny tsy hitelina ny sira dia tokony hanapa-kevitra ny vehivavy tsirairay fa tsy misy zavatra mampidi-doza ao amin'ity rano ity.
Ahoana no fomba hampifaliana olona amin'ny tanany?
Ny Massage dia fotoana iray manokana hanampiana ny olona hitsaoka sy hahatonga azy ho faly. Izany fihetsika izany dia mety ho fialana tsara amin'ny firaisana ara-nofo. Mba hahalalanao ny fomba hahatonga ny olona hanao tànana tsara, mila mahafantatra ny toerana misy faritra erogenous ianao. Ho an'ny fofona tsara, ary koa ho an'ny fialana fanampiny, ampiasao aromatika, ny tena zava-dehibe dia ny fofona tahaka ny lehilahy. Manandrana hetsika samihafa: manindry ny totohondrinao, manafosafo ny palmie amin'ny fomba samihafa ary amin'ny faribolana.
Toro hafa, ahoana no hahatonga ny olona ho tsara - ampiasao ny ampahany hafa amin'ny vatanao, ohatra, ny tratra. Tsy ny ratra, ny kibo, ny tongotra ary ny faritra hafa. Andramo ny tsy hikasika ny fiterahana mandra-pahatapitr'ity laharam-pahamehana ity, hitehirizana ny fahatafintohinana, hitarika ny mpiara-miombon'antoka amin'ny tampon'io. Maro ireo hevitra mavesa-danja ao an-tsofiny, noho izany, aza hadinonao ity ampahany amin'ny vatanao ity.
Ahoana no fomba hampifaliana olona amin'ny lelany?
Ny fifankatiavana dia afaka samy manana ny ampahany amin'ny vatany, izay hanatsara ny fahatsapana. Azo ampiasaina amin'ny karazana karazana samihafa ny fiteny, ohatra, amin'ny oroka na fofona. Noho ny hatsikany sy ny fahaizan'izy mivady, ary amin'ny fampiharana amim-pahakinganana dia azo atao ny manolotra fahafinaretana lehibe ho an'ilay mpiara-miasa. Misy karazan-javatra maromaro fototra mahasambatra ny olona amin'ny fanampian'ny fiteny iray.
Ampiasao izany mandritra ny "oroka Frantsay", izay manome ny olona fahafinaretana lehibe indrindra.
Rehefa manasitrana, ohatra, ny sofina dia tsy misalasala mampiasa ny lela, mitarika azy eo amin'ny saikan-jaza na ny lobe. Ny zava-dehibe indrindra, tandremo ny famonjena.
Tsy azo atao ny maka sary an-tsaina ny fofona tsara tsy misy ny fandraisana anjara amin'ny fiteny. Afaka manao fihetsiketsehana isan-karazany izy ireo: manindrona ny loha, manao fihetsiketsehana amin'ny tondrozotra samihafa, manosika, mandany ny lavany rehetra amin'ny penis sy ny sisa.
Ny anjara andraikitra eo am-pandriana
Misy fomba maro ahafahanao mamolavola ny fiainanao ara-nofo, ohatra, azonao atao ny miezaka amin'ny sary samihafa, mampiseho ny erotic fantasy misy anao . Ho an'ny lalao milalao tsara mba hahombiazana, zava-dehibe ny tsy mihaino tsara ny bika aman'endrina, fa koa mankatò tanteraka ny sary. Ny fananana faniriana, dia afaka mahatsikaritra ny erotic fantasy ianao, saingy misy ohatra misy ny lalao milalao eo amin'ny fandriana, izay malaza indrindra.
Ny mpanompovavy dia andevo . Ny lehilahy na dia mahery aza, indraindray tiany hankatò izy. Azo atao ny milalao sy ny andininy hafa, raha misy olona iray manapaka, ary misy vehivavy mitandrina.
Ny niharam-boina . Ny tahotra ny vehivavy miaraka amin'ny havan-tiana dia afaka manampy mamomamo ny fandriana. Ny firaisana dia miorina amin'ny endrika mafy.
Ny marary dia marary . Ny erotic fantasy of men dia ahitana ity iray ity, izay mampientanentana amin'ny roa tonta.
Mpanjono ny mpivarotra . Raha maniry ny hahatonga ny namana tsara ny vehivavy, dia hanao ny asany ny dihy mahafinaritra ao amin'ny faritra mifanentana amin'izany.
Mahatalanjona ny lehilahy iray eo am-pandriana?
Inona no azoko ampiasaina fa tsy miloko marefo?
Misiônera manao hoe - nahoana no lazaina sy ny fomba hanamoràna azy io?
Ny fijaliany aorian'ny firaisana
Ahoana ny fomba fanaovana firaisana ao an-trano?
Ahoana no ahafantarana fa virjiny ny virjiny?
Toerana tsy misy tank
25 biby, izay te-hitarika hafanana!
Ny zazakely dia miady an-tongotra
Ny faran'ny pejin-tsekely atsinanana: misaraka i Janet Jackson ary manitatra ny renivohitra amin'ny antsasany!
15 zava-misy momba ny fahatsapana fofona, izay tsy fantatrareo
82 tsara indrindra amin'ny tantaran'ny sinema
Lera Kudryavtseva tsy misy fananganana
Viral pemphigus amin'ny ankizy
Haavo amin'ny 2015
Diana Kruger dia hita ao amin'ny pejin'ny gazety Town & Country
Sakafo ho an'ny sakafo
Sakafo mofomamy amin'ny soja soja
Ahoana ny fomba famindrana raozy amin'ny fahalavoana?
Toeram-pisakafoanana any Provence
Ny krizin'ny 30 taona